Xildhibaan Yuusuf Geelle Ugaas (Dhagey) oo loodoodraty Aqlka Sare | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Xildhibaan Yuusuf Geelle Ugaas (Dhagey) oo loodoodraty Aqlka Sare
Baarlamaanka Maamulka Galmudug ayaa goordhaw magaalada Cadaado ku doortay Xubintii afaraad ee kamid noqonaya Xubnaha maamulkaasi ku matalaya Aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Xildhibaan Yuusuf Geelle Ugaas (Dhagey) ayaa loo doortay in uu kamid noqdo Xubnaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka, waxa uuna helay codad gaaraya 65-cod halka Musharaxii la tartamayay Cabdulle Xasan Nuur uu helay 7-cod oo kaliya.
Xildhibaan Yuusuf Geelle Ugaas ayaa kasoo jeeda Beesha Duduble , waxa uuna kamid ahaa Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya eewaqtigiisu dhamaaday, Siyaasigan ayaa horey loo saadaalinayay in uu kamid noqonayo Xubnaha Aqalka sare.
Magaalada Cadaado waxaa goordhaw ka bilaabatay tartan u dhaxeeya Labo Musharax oo gabdho ah oo ku tartamaya kursiga aqalka sare, waxaana gabdhahan oo kasoo Jeeda Beesha Abgaal gaar ahaan Waceysle la saadaalinayaa in ay guuleesan doonto ZamZam Daahir Maxamuud oo taageero ka heleysa Madaxtooyada Soomaaliya.
Sida aan Wararka ku helnay doorashada Xubnaha Aqalka sare ee kasocota magaalada Cadaado ayaa ugu dambeysa xubinta hada doorashadeeda socoto, waxaana tartanka xubnaha kale ee haray lagu wadaa in beri dhacdo hadii rabi idmo.